Siyaasadda Nabadgelyada Qaran
Home / Siyaasadda Nabadgelyada Qaran
Date: Monday, August 23, 2016
i) Nabadgelyada Gudaha:
Si loo helo ummad ku nool nabadgalyo iyo xasilooni waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay dhisidda iyo taabo gelinta ciidan xirfad leh oo ilaaliya nabadgelyada dalka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in xoogagga nabadgelyada ilaalinaya ay helaan tababar dhamaystiran, qalab tayo leh iyo isgaarsiin hufan oo ay ciidamadu kuwada xiriiraan.
Si loo taaba geliyo arimahaas waxaa dowladdeydu ahmiyad gaara siinaysaa:
1. Dib u dhiska awoodda iyo tayada xoogagga ciidamada nabadgelyada maxaliga ah si loo helo xiriir iyo xog wadaag ku saabsan dhawrista nabadgelyada dalka.
2. Soo uruurinta xogaha loo baahan yahay ee cadawga, si looga hortago qatar kasta oo ku imaan karta nabadgelyada qaranka (gudaha iyo dibadda)
3. Kor u qaadista awoodda hay’adaha sirdoonka & nabad sugidda qaranka.
4. Xaqiijinta in ciidamada nabadgelyada qaranku ay si joogto ah u helaan gunno iyo mushaar ku filan iyagoo dhammaan haysta qalab tayo leh iyo tababar dhamaystiran.
ii) Difaaca Qaran:
Waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay dhismaha ciidan xirfad iyo awood u leh difaacidda qatar kasta oo soo wajahda qarankeena, haday noqon lahayd mid ka timaada dhulka, cirka ama badda.
Si loo taabageliyo arimahaas waxaa lagama maarmaan ah hirgelinta qodobada soo socda:
1. Dhismaha ciidan awood iyo anshax leh oo difaaca madaxbanaanida qaranka, si nabadgelyo waarta looga hirgeliyo dalka.
2. In la helo ciidan waajibaadkiisa u fuliya si niyadsami iyo daacadnimo ku jirto, si dhammaystiran u hela gebi ahaan baahidooda iyo xuquuqdooda aasaasiga ah sida; mushaar ku filan, taageero caafimaad iyo xuquuq lasiiyo ciidanka hawlgabka ah.
3. In la sharfo loona garwaaqsado halgankii ay dalkeenna u galeen ciidanku, iyo in ciidamada ku dhaawacmay difaaca dalka ay helaan daryeel caafimaad iyo taageero dhaqaale oo ku filan baahidooda aasaasiga, si lamida taas, ciidamada ku naf waayay halgankana waa in qoysaskii ay ka tageen ay helaan daryeel iyo taageero dhaqaale oo joogto ah. Arinkaan wuxuu kor u qaadaayaa niyadsamida iyo daacadnimada ciidamada nool ee shaqaynaya.